ဖေ့ဘဇွတ်ပေါ်မှာ စိတ်ချမ်းသာစွာ နေတော့မယ်.. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဖေ့ဘဇွတ်ပေါ်မှာ စိတ်ချမ်းသာစွာ နေတော့မယ်..
ဖေ့ဘဇွတ်ပေါ်မှာ စိတ်ချမ်းသာစွာ နေတော့မယ်..
Posted by နွေဦး on Jun 17, 2017 in Creative Writing, Think Different | 12 comments
နွေဦး တယောက် သံဝေဂတွေ ရပြီးသကာလ
ဖေ့ဘဇွတ် ပေါ်မှာ ဘယ်လို နေရင် စိတ်ချမ်းသာမလဲ လို့
နည်းလမ်းပေါင်းစုံ ဆရာပေါင်းစုံနဲ့ အကြံပေါင်းစုံ ထုတ် လိုက်တဲ့အခါ
အောက်ပါ ဖေ့ဘဇွတ်ပေါ် ချမ်းသာစွာ နေနည်းနိသယျဉ်း ကို အောင်မြင်စွာ တွေ့ရှိပါတော့တယ်…။
၁ ။ ။ မသိပါနဲ့ ။
၂ ။ ။ မပြောပါနဲ့ ။
၃ ။ ။ မတွေးပါနဲ့ ။
၄ ။ ။ မမေးပါနဲ့ ။
၅ ။ ။ မရေးပါနဲ့ ။
၆ ။ ။ မနာပါနဲ့ ။
၇ ။ ။ မပါ ပါနဲ့ ။
၈ ။ ။ မသာပါနဲ့ ။
၉ ။ ။ မညာပါနဲ့ ။
၁၀ ။ ။ မအာချောင်နဲ့ ။
Post တခုကို ဖတ်လိုက်တဲ့အခါ ကျွန်ုပ် သိနေတာတွေ ဖြစ်နေပေမဲ့
ကျွန်ုပ်ရဲ့ ချမ်းသာစွာနေနည်း စည်းမျဉ်း နံပါတ် ၁ အရ
မသိသလို သဘောထားပြီး ဖတ်ပါမယ် ။
Post ကို ဖတ်ပြီးတဲ့အခါ ဘာကြောင့်ဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူနဲ့ဖြစ်ဖြစ်
ဒီ Post အကြောင်းကို မဝေဖန်မိ မပြောမိ စေဖို့ သတိထားပါမယ် ။
Post ကို ဘာအတွက်ရေးတာလဲ ဘယ်သူ့ကို ရည်ရွယ်ပြီးရေးတာလဲလို့
ဆက်စပ်ပြီး မတွေးမိ အောင် စိတ်ကို ထိန်းထားပါ့မယ် ။
Post ထဲပါတဲ့ အချက်တွေကို မရှင်းတာတွေ မသိတာတွေ ရှိရင် လဲ
ကိုယ့်ဘာသာ ကျိုးစားပြီး နားလည်အောင် လုပ်ပါ့မယ် ။
မသိလို့ မရှင်းလို့ မေးမိရင် Post ပိုင်ရှင်က ပညာစမ်းတယ် ထင်တတ်လို့
မမေးမိအောင် ဆင်ခြင်ပါ့မယ် ။
Comment Box မှာ ကောင်းသည်၊ ဆိုးသည်၊ ကြိုက်သည်၊ မကြိုက်သည်၊ ဆိုတာမျိုးတွေ
ဝင်ပြီး ရေးမိတဲ့အခါ Post ပိုင်ရှင်နဲ့ တကွ Friends တွေကပါ ဝေဖန်ပြောဆိုလာတတ်ကြတော့
တခါတခါ ငယ်တဲ့အမှုက ကြီးသွားတတ်တာမို့ မရေးမိ အောင်သတိပြုပါမယ် ။
၆ ။ ။ မနာနဲ့ ။
ဖေ့ဘဇွတ်ပေါ်မှာ နိုင်ငံရေး လူမှုရေးတွေနဲ့ တဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့ ငယ်ကျိုးငယ်နာတွေ ဖေါ်ပြီး
တိုက်ခိုက်နေတာတွေက ဘေးချော်ပြီး ကိုယ့်ဘက် ထွက်လာ ထိခိုက်တာလဲ ခနခန ကြုံပါတယ် ။
ဒီလိုအခါမျိုးတွေမှာလဲ မနာတတ် အောင် ကြိုးစားနေပါမယ် ။
ဖေ့ဘဇွတ် ပေါ်က တိုက်ပွဲတွေကြားမှာ ဘုမသိဘမသိ ကန့်လန့်ကန့်လန့် နဲ့ ပါသွားရင်
ဟိုလူကဆဲလိုက် ဒီလူက ဆဲလိုက်နဲ့ အဆဲရေယဉ်ကြောမှာ မြောသွားတတ်တာမို့
လေတိုက်ပွဲတွေကြား မပါမိ အောင် ရှောင်နေပါ့မယ် ။
၈ ။ ။ မသာ ပါနဲ့ ။
ကိုယ်တင်လိုက်တဲ့ Post က Like ဘယ်လောက်ရတယ်. Comment တွေက ဘယ်လိုတွေရေးကြတယ်. ဘယ်နှစ်ယောက်က Share တယ်ဆိုပြီး မပျော်မိအောင် ဝမ်းမသာမိအောင် လူတကာထက် မသာအောင် နေတတ်အောင် ဂရုစိုက်ပါမယ် ။
တခါတခါ သိနေရဲ့သားနဲ့ မသိချင်ရောင်ဆောင်ပြီး ညာတတ်သလို မသိတာကိုလဲ သိသလိုလိုနဲ့ ညာတတ်ကြပြန်သေးတယ် ။ မသိဘဲ ညာလိုက်တဲ့ တချို့ကိစ္စတွေက ရှင်းမရအောင် ရှုပ်သွားတတ်တော့ တယောက်နဲ့တယောက် မိတ်ပျက်ရတတ်တာမို့ နောင်အခါ မညာမိ အောင် ကြိုးစားနေပါမယ်..။
၁၀ ။ ။ မအာချောင်ပါနဲ့ ။
ကျွန်တော်တို့တွေ ဖေ့ဘဇွတ်ပေါ်မှာ ဟိုရေးဒီရေး ဟိုပြောဒီပြော လွတ်လပ်စွာ ရေးသားပြောဆိုတတ်ပါတယ်..။
တခါတခါ သူတပါးရဲ့ လျှို့ဝှက်ထားတာလေးတွေ သိရရင် ဦးဦးဖျားဖျား Post ရေးပြီး တင်တတ်ကြ Share ပြီးအာချောင်တတ်ကြပါတယ် ။အဲဒါတွေက ပျော်စရာကောင်းတယ်ထင်ပေမဲ့ တကယ်က ပြသနာအကြီးကြီး ဖြစ်တတ်လို့ နောင်ဆိုရင် အာမချောင် အောင် နှုတ်ပိတ်လို့ နေတတ်အောင် ကြိုးစားပါ့မယ် ။
ကဲ ..ဒီလိုနည်းလေးနဲ့ ဖေ့ဘဇွတ် ပေါ်မှာ နေကြည့်မယ်ဆို
စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာရှိမယ် ထင်တာပါဘဲ.. ။
( ဒီလိုနေလို့မှ စိတ်မချမ်းသာရဘူးဆိုရင် ဒီ နိသယျ ကို ပြောင်းပြန်လှန်ပြီး ဖေ့ဘဇွတ်ပေါ် မွှေပြီသာမှတ်..)
ရွာမှာတော့ 66D မရှိဘူးလို့သဂျီးပြောသဗျ. .
ရွာမှာတော့ စိတ်ရင်းအတိုင်းသာ ပြောပါဗျို့းးးး
၆၆ ဃ ထက် ရွာသူတွေ ကြောက်ရတာ..
စိတ်ရင်းအတိုင်းက သူတို့ ပြောကြတာ..
ဟိုလက်နက်ကိုင်တွေလို ပစ်ရင်းပြေးမှသာ လွတ်ဘွယ် ရှိတယ်..
ထပ်ဖြည့်လိုက်ပါဦး … ၁၁ ။ ။ မစောင်းချိတ်ပါနဲ့ … ခွိ
ကျနော့်မူကတော့ ဖွဘုတ် ဆယ်လီတွေ သူ့ထမိန်တွေရဲ့ပို့စ်ကို မရှယ်ဘူးခင်ည …
ကိုယ့်သဘောပါတယ်လို့ဆိုသော်ငြား ဂွစာတွေက လာထောက်လို့ မဖြေနိုင်ရင် …
“ကိုယ်ပိန်းတာ လူသိတယ် …”
(မနေနိုင်ရင် အန်ဖောထား)ဘယ်လောက်ငြင်းငြင်း မျဉ်းပြိုင်တို့မည်သည် ဆုံမှတ်မရှိမို့ပါ
ဟင်​ ဒါဆို​ရှောင်​ရန်​အချက်​​တွေက ကုန်​သ​လောက်​ရှိ​နေပြီ ​နောက်​ဆုံးတခု မဖွင့်​ပါနဲ့ဘဲ ကျန်​​တော့မယ်​ထင်​တယ်​ဗျ။
Log out ထားလိုက် ၊စိတ်အချမ်းသာဆုံး။
အဲဒီနံပါတ်တွေအကုန်လိုက်နာနိုင်ရင် သီးခံခြင်းပါရမီ ဖြည့်ပြီးသားဖြစ်မှာ …
ဒီ နိသယျ ကို ပြောင်းပြန်လှန်ပြီး ဖေ့ဘဇွတ်ပေါ် မွှေတာကမှဖြစ်နိုင်တာ
အာ့တွေ တစ်ခုမှ မလုပ်နိုင်ရင် အရေထူ မျက်နှာပြောင်ရမေ။
သူများပြောနိုင်သလို ကိုယ့်ပြောရင်လည်း ခံနိုင်ရမေ။